Olee otú Jiri iMovie (iMovie 08/09/11) na-eme a Home Movie
> Resource> iMovie> Olee otú Jiri iMovie dezie Videos-eme ka a Home Movie
Apple si iMovie na-nabatara niile Mac ọrụ maka n'ụlọ nkiri Ndinam nke na-enye ohere ndị dezie obere vidiyo, tinye ụda na voiceover egwu na òkè fim n'ụzọ dị iche iche. Na isiokwu a, anyị ga-egosi gị otú iji iMovie ike a obere film nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Olee otú Jiri iMovie ka fim
Akpa, ngwa, ẹkedori iMovie. Na site na "File" na isi menu, họrọ "New Project" na-amalite a ọhụrụ iMovie oru ngo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ike a nkiri ụgbọala na-adọkpụ na iMovie, ị nwere ike na-ezo aka otú ike a nkiri ụgbọala na-adọkpụ na iMovie.
Mgbe ahụ a window ga-gbapụta dị ka n'okpuru. Pịnye na aha aha gị oru ngo ma họrọ a isiokwu, wee pịa "Mepụta".
Na File ndọpụta ndepụta, họrọ "Import"> "Import Movies" ka nchọgharị fim na vidiyo na kọmputa gị na họrọ fim ị chọrọ dezie ka iMovie, wee pịa "OK".
Atụmatụ: Biko eme ka n'aka gị videos na-akwado iMovie, ọ bụrụ na video egosi isi awọ, ọ pụtara na ha na dakọtara na iMovie. N'oge a, i kwesịrị iji a Video Ntụgharị maka Mac iji tọghata videos ka iMovie akwado video formats mbụ ahụ ịgbakwunye converted videos ka iMovie. Dị ka DVD fim, i nwere ike iji a Mac Video Converter Ultimate iji tọghata DVD ka iMovie MP4 videos mbụ na ịgbakwunye MP4 videos ka iMovie.
The videos mgbe ahụ ga-egosipụta na ihe omume Library na ala nke ihuenyo. Ugboro abụọ click na obere vidiyo na-akanye akara ya odo iji họrọ clip. Họrọ na ịdọrọ ndị video clip na ị chọrọ ka a nkiri ka oru ngo n'ọbá akwụkwọ.
Ma ugbu a, ị nwere ike idezi gị videos kpamkpam, dị ka tinye ntughari ka iMovie, ike foto na foto mmetụta, adị n'elu na-akwụsịlata videos, wdg
Mgbe ị okokụre gị iMovie oru ngo, ị nwere ike họrọ dechara oru ngo na site na menu mmanya n'ụlọ n'elu, họrọ Share. Ị nwere ike ịkekọrịta ya n'ọtụtụ ụzọ, dị ka bupu iMovie ka YouTube ma ọ bụ ọkụ iMovie ka DVD. Dị nnọọ họrọ onye ị chọrọ na-eso na-egosi rụchaa iMovie oru ngo ebupụ.
Mere! Ị na-eji iMovie ike a n'ụlọ nkiri, na-enweta ya!
Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ iMovie maka Windows?
Ọ bụrụ na ị na-adịghị MacBook ma ị n'ezie dị ka ọrụ na interface nke iMovie ma ọ bụ ị na-adịghị amasị iMovie, ị dị nnọọ mkpa ụfọdụ uzo ozo na-agba ọsọ na gị Mac ma ọ bụ PC. Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) gị ga-abụ nhọrọ kasị mma, nke nwere ike ewepụtụ, kewaa, bugharia, tụgharịa ma jikota fọrọ nke nta niile dị iche iche nke ọsọ ọsọ na fim ndị karịrị 300 mmetụta. Ọ nwere ike na-arụ ọrụ na Mac ma ọ bụ Mmeri na elu ndakọrịta enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ. Free ikpe mbipute dị n'okpuru